Faahfaahin ku saabsan Qarax khasaare Geystay oo ka dhacay Magaalada Gaalkaacyo – SBC
Faahfaahin ku saabsan Qarax khasaare Geystay oo ka dhacay Magaalada Gaalkaacyo
Posted by admin on Febraayo 11, 2013 Comments
Taliye ku xigeenka booliska Puntland Gen.Muxidiin Axmed Muuse ayaa ka badbaaday sakaa Barqaadii Qarax xoogan oo lagula eegtay Gadiid uu la socday Gudaha Magaalada Gaalkacyo kaasi oo loo adeegsaday gaari nooca Mark II ah oo laga sooo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Warar lagu kaalsoonan karo oo laga helayo gaaalkacyo ayuu ku waramaya in ay dhaawacmeen in ku dhow 7 askari oo ka mid ah ilaalada taliye xigeenka Halka Gen Muxiyaadiin Axmed Muuse oo ah Taliye Xigeenka Booliiska Puntland uu ka badbaaday Qaraxaas.
Sarakiil ka tirsan Maamulka ayaa Noo xaqiijiyay in Dhaawaca Taliye xigenka uu yahay mid Fudud oo ka soo gaaray gacanta ka dib markii u gaaaray Holac Ama Dabka Qaraxa Xaaladiisuna ay iminka tahay mid aad u wanaagsan
Marka laga tago khasaaraha Soo gaaray Ciidamada Ilaalada ee Taliye xigeenka Dad kale ayaa dhawaacyo Fudud iyo kuwo culusba ka soo gaareen weerarka qarax ee lagula beegsaday gaaalkacyo Taliye xigeenka Booliiska Puntland magaalada Gaalkacyo ku dhawaad 5 qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramayaa in dhaawacyo kala duwan ay soo gareen
Gaariga Qaraxa Geystay ayaa ku qaraxay Afafka hore ee Taliska Booliiska Gobolka Mudug oo ah goob Dad kale duwana ay ku sugnaaayeen xilligii Qaraxu dhacayay ayaa la sheegay inay Goobta Marayeen Gaadiidka uu la socday Taliye xigeenka Booliiska Gen Muxiyadiin Axmed Muuse.
Dhinaca kale Barta Mid ka mid ah Baraha Internetka ee ay adeegsadaan Xarakada alshabaab ayaa lagu qoray In mid ka mid ah Saraakiisha Alshabaab ay sheegteen Masuuliyada Weerarka Qarax ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Sarkaalka alshabab u hadlay oo aan Magaciisa lagu qorin warbixinta ayaa waxaa lagu qiray in ay Beegsadeen qaarka mid ah Masuliyiinta Amaanka ee Puntland oo uu ku jiro Gen Muxiyaadiin axmed Iyo saraakiil kale.
Warka qoraalka ee la soo dhigay Bar internet oo ku hadasha afka alshabaab waxaa lagu sheegay in uu qaraxu ahaa mid xoogan Balse aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee weerarkaaasi uu geystay.
Ma jirto Wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Puntland oo ku aaadan qaraxa Maanta Gaaalkacyo lagula eegtay Taliye xigeenka Booliiska Puntland oo Mudooyinkii ugu danbeyay Howlo shaqo ujoogay Magalada Gaalkacyo.
Qaraxan ayaa noqonaya Kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo muddooyinka ka dhaca deegaanada Puntland iyadoona ay masuuliyadiisa sheegteen Xarakada alshabaab.